Xanibaadii Rooble ee lacagta dowladda oo xiisad kale abuurtay | KEYDMEDIA ONLINE
Xanibaadii Rooble ee lacagta dowladda oo xiisad kale abuurtay
Farmaajo iyo xubno kale oo ku dhaw dhaw ayaa ka carooday talaabadii Rooble uu ku xanibay lacagaha dowladda ee yaalla Bangiga Dhaxe, waxayna tani abuurtay xiisad kale.
MUQDISHO, Soomaaliya - Labo maalin kahor madaxweynayaasha maamuladda Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa ku guuleestay inay is hor fadhiisiyaan Farmaajo iyo Rooble si ay xal uga gaaraan khilaafka ka dhaxeeya.
Kulamo kala duwan oo ay qeyb kula ahaayeen iyo kuwo labadooda uunu dhaxeeyay ayaan laga gaarin wax is afgarad ah, waxayna weli wadaan Qoorqoor iyo Lafta gareen dadaalo dheeraad ah oo ay ku doonayaan in xal looga gaaro khilaafka taagan.
Khilaafka labada dhinac ayaan weli wax iska beddelin, waxaana laga baqayaa in khilaafka uu sii xoogeesto, ayna labada dhinac qaadaan talaabooyin kale oo xaalka uga sii dari kara.
Fashilka wadahadalii socday ayaa lagu eedeynayaa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo, kaas oo wali ku dhegan in kiiska Ikraan Tahliil laga soo celiyo maxkamada, sidoo kalena taliyaha Hay’adad NISA isagu soo magacaabo.
Dhankiisa Ra’isul Wasaare Rooble ayaa ilo ku dhaw dhaw sheegayaan in uu ka horyimid in uu ka tanaasulo qodobadii uu isna ku dhegnaa, sida cadaalad u helida kiiska Ikraan Tahliil iyo isbadalka uu ku sameeyay Taliska NISA iyo Wasaarada Amniga.
Howlaha shaqo ee dowladda ayaa waxaa hareeyay khilaafka labada masuul, mid kastana waxa uu ku dhegan yahay qodobbo uu u arko in ay ahmiyad gaar ah u leedahay, inkastoo shacabka Soomaaliyeed ay ku bogaadinayeen Ra’iisul wasaare Rooble sida uu caddaalada ugu raadinaayo Ikraan Tahliil.
Ilaa hadda ma muuqdaan ififaalo isku soo dhawaansho ah iyo isku tanaasul ay sameenayana Rooble iyo Farmaajo, balse hadii ay sii socoto tani waxa ay caqabad ku noqon karaan dardargelinta doorashooyinka dalka ka dhacaya.